Xayyaarri Ruusiyaa biyya Masrii irratti kufe sababa boombiitiin jedhame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Xayyaarri Ruusiyaa biyya Masrii irratti kufe sababa boombiitiin jedhame
Xayyaarri Ruusiyaa biyya Masrii irratti kufe sababa boombiitiin jedhame
Xayyaarri Ruusiyaa biyya Masrii irratti kufe sababa boombiin ta’uu Ruusiyaan beeksiste. Hanbaan dhukaatuu ykn boombii qaama xayyaaricha caccabee fi meeshaa imaltootaa irratti argameera.
Mataan humna tikaa Ruusiyaa, ‘Akka qorannoo keenyaatti boombiin kiiloo tokkoo keemikaala TNT jedhamu irraa manatti tolfame xayyaarichi samii irratti akka dhooyu taasiseera,’ jeche. Itti dabaluudhaanis, ‘Gocha shororkeessitootaa ta’uu isaa afaan guuttannee dubbanna.’
Xayyaarri kuni Onkoloolessa 31, 2015 Shaarm el Sheek ( Masrii) irraa gara Piiterisbarg (Ruusiyaa) osoo balaliu ture kan gammoojjii Siinaa irratti kufe. Xayyaara keessa namoonni turan hunduu (224) dhumaniiru.
Sababaan kufaatii xayyaarichaa rakkoo teeknikaa ta’uu danda’a shakkii jedhutu amgawoota masriifi Ruusiyaa bira ture, gara jalqabaatti.
Gareen ISIS, inni Siinaa keessa socho’u, itti gafatamummaa isaa fudhachuun niyaadatama.
Prezidaantiin Ruusiyaa Vilaadmiir Puutiin kanniin kufaatii xayyaarichaaf sababa ta’an hunda akka adamsan humntoota tikaa biyyattii ajajaniiru.
Previous articleFinfinnee keessatti lafti meetir iskuweerii 242 qarshii miliyoona 86’tti gurguramte
Next articleBuna dhuguun umrii dheerinaaf faaydaa guddaa qaba, jedha qorannoon haarofni